IGem eNorth Lake Tahoe Incline Village Condo - I-Airbnb
IGem eNorth Lake Tahoe Incline Village Condo
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Lloyd
U-Lloyd Ungumbungazi ovelele
Ukuqashiswa kwe-Ski noma nyanga zonke - Ukunethezeka nokuthula kukulindile e-N. Lake Tahoe Nevada (I-Incline Village). Le ndawo yokuphumula eLake Tahoe iseduze namadolobha aseduze eReno, Sacramento & Bay Area nokho kude nezixuku, ithrafikhi, nomsindo. Le ndlu ethokomele yothando inekhishi elisebenzayo lokudla, okokuzijabulisa kwesimanje, nombhede omusha nosofa. Ihlanzekile futhi iyasebenza futhi isendaweni enhle enkabeni yeDolobhana. Amabhishi aseduze: I-Sand Harbor kanye ne-Kings Beach. Izinketho ze-Ski & Mountianbikking ziningi
Ukunethezeka nokuthula kukulindile eNyakatho yeLake Tahoe Nevada (I-Incline Village). Le ndawo yokuphumula eLake Tahoe iseduze namadolobha aseduze eReno, Sacramento, Bay Area, neStockton, nokho kude nezixuku, izimoto nomsindo. Le ndlu yothando, ethokomele e-Incline Village (eyaziwa njengetshe eliyigugu laseTahoe) itholakala kuleli dolobhana elicebile nelibukekayo le-Incline Village lapho, lapho libuka khona linokubukwa kwezintaba ezingu-360-degree, ukushona kwelanga OKUNGENZEKI, Isitayela esihle seLake Tahoe izinsuku nobusuku. izinkanyezi ezikhanyayo nenyanga. Iyunithi ngokwayo inombono omuhle kakhulu Wehlathi ngaphandle kwevulandi layo. Qiniseka ukuthi wenza indlela yakho ekhuphukela e-Mount Rose Lookout ukuze uthathe ukubukwa okungu-360; kuyamangaza.
Leli khaya eliyingqayizivele liyikhondomu e-All Season's Resort, elisenkabeni ye-Incline futhi kungeneka kuyo izitolo, izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu zegrosa, imizila, isikhungo sokungcebeleka kanye nokuphila kwasebusuku. Isitobhi se-Ski Bus ukuya e-Diamond Peak sitholakala endaweni yethu yokupaka futhi sikumizuzu nje kuphela, noma, thatha imizuzu engu-15 ukuya eMount Rose, noma, imizuzu engu-20 ukuya eNorthstar eTahoe, noma uhambo lwemizuzu engama-30 ukuya. I-Heavenly Valley Resort kanye nemizuzu engama-40 ukuya e-Squaw Valley.
Libukeka kahle, libekwe kahle, futhi lihlome ngokugcwele igumbi lokulala elingu-1 elinempahla yesimanje nezinto zikagesi, leli khaya laseNorth Lake Tahoe Condominium liseduze nechibi, izintaba namabhishi. 1 kuvulandi/umpheme ongaphandle ukuze ujabulele ukubukwa okuhle nomoya ohlanzekile. Imizuzu engama-40 ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Reno/ Tahoe (RNO) kanye nemizuzu engama-90 ukusuka eSacramento International Airport (SMF).
Ubumnandi obukhumbulekayo bomndeni, abangani, kanye/noma izindawo zokuphumula zothando. Ukulala okungu-3-4, okubili Ekamelweni Lokulala kanye nokungu-1-2 egumbini lokuhlala kumbhede we-queen aero. Ilungele Abantu Abadala Abangu-2 kanye Nezingane. Noma kubantu abadala besikhathi eside 2.
4.80 out of 5 stars from 208 reviews
4.80 · 208 okushiwo abanye
I-Incline Village, Nevada, kanye neCrystal Bay zitholakala eWashoe County ogwini oluhle olusenyakatho yeLake Tahoe.
Kukho konke ukuhlala kwakho zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi futhi usazise uma udinga noma yiluphi usizo. Kungenzeka sibe ngasogwini oluphambene kodwa sitholakalele ukusiza amahora amaningi.
Sinaye umsizi wasendlini futhi uma udinga noma yini ungamthumelela umyalezo ngesikhathi sebhizinisi - ulwazi lwakhe lusemininingwaneni yakho yokwamukela
Kukho konke ukuhlala kwakho zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi futhi usazise uma udinga noma yiluphi usizo. Kungenzeka sibe ngasogwini oluphambene kodwa sitholakalele ukusiza amah…
ULloyd Ungumbungazi ovelele